गएराति एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानीय त्रसित ! - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS गएराति एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानीय त्रसित !
गएराति एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानीय त्रसित !
महोत्तरी, ३१ साउन । महोत्तरीमा एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानियहरु त्रसित भएका छन् । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाको वडा नं. ५ राजपुरमा पाँच घण्टाको अन्तरालमा १६ जनालाई सर्पले टोकेको हो ।